Xog: Sheekh Shariif oo dalbaday in laga wareejiyo hoggaanka Midowga Musharaxiinta | Dalkaan.com
Home Warkii Xog: Sheekh Shariif oo dalbaday in laga wareejiyo hoggaanka Midowga Musharaxiinta
Muqdisho (dalkaan) – Hoggaamiyaha Midowga Musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa xubnaha Midowga Musharaxiinta mucaaradka ka dalbaday inay doortaan hoggaan cusub, isagana uusan intaan ka badan sii hoggaamin karin golaha.
Sida ay xog ku heshay dalkaan, kulan seddex cisho kahor ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu Sheekh Shariif ku wargeliyey xubnaha golaha inuu ahaan doono xubin caadi ah oo golaha ka tirsan, islamarkaana uu kasoo qeyb geli doono kulamada.
Sida ay illo wareedyo ka tirsan golaha Midowga Musharaxiinta u xaqiijiyeen Caasimadda Online, dood adag ayaa ka dhalatay codsiga uu soo gudbiyey Sheekh Shariif ee ah in laga wareejiyo hoggaanka Golaha.
Inta badan xubnaha Midowga Musharaxiinta ayaa diiday inay aqbalaan codsiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif, taasoo ay ku tilmaameyn inay sababi karto burbur ku yimaado Golaha Midowga Musharaxiinta.
Xubnaha golaha Midowga Musharaxiinta ayaa Sheekh Shariif ka codsaday inuu dib u dhigo iscasilaadiisa, islamarkaana golaha uu isugu yimaado kulan kale oo looga xaajoonayo arrintaan soo korortay.
Sida ay Caasimadda Online ogaatay, Sheekh Shariif ayaa waxaa ka go’an inuusan sii hoggaamin golaha, waxaana fasiraado kala duwan laga bixiyey sababta keentay go’aankiisa.
Muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa aad u xoogeystay tuhunada ku saabsan in Shariif Sheekh Axmed uu ku milmay kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo dhaawaceyo mabaadii’da loo sameeyey Golaha Midowga Musharaxiinta.
Dadka xogtan badankeed faafiyey ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin Golaha Midowga Musharaxiinta iyo dad kale oo aad ugu dhow, waxaana la sheegay in Sheekh Shariif uu dhibsaday tuhunkaas iyo fariimaha laga faafinayo taasoo keentay inuu go’aankaan qaato.
Sidoo kale, Sheekh Shariif ayaa hadda qorsheenayo inuu si gooni u baxo oo uu toos u billaabo ololihiisa doorashada oo uusan waqti badan isaga lumin mucaaradnimada Farmaajo.
Previous articleDaawo: Dagaal ka dhashay cunto laga cunay maqaayad Muqdisho ku taal oo sababay dhimasho iyo dhaawac
Next articleDaawo: Xasan Cali Kheyre oo war kasoo saaray khilaafka R/W Rooble iyo Farmaajo
Taabid oo warbixin ka soo saaray xuska 14-ka October
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir, Mudane Taabid Cabdi Maxamed oo si weyn loogu xasuusto kaalintii uu ku lahaa gurmadka...
Sawirro: Iran iyo Azerbaijan oo dagaal uu ka dhex-qarxi rabo –...
Juventus oo Tixgalineysa inay u adeegsato Aaron Ramsey saxiixa xiddiga Manchester...
Layaabka Ciyaaro: Thomas Tuchel oo dalbaday in 8 Kaamiro lagu Xiro...
Wakiilka Franck Kessie oo u sheegay Man United iyo Barcelona Qaabka...